စမ်းသပ်ဖိအားပိုက်ကိုအသေးစားဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်တွင် သုံး၍ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်တွင်ဖိအားကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်မှာ jight weight.wear resistance, pact res istamce, အားကောင်းသော၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အဆင်ပြေမှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။
အရည် ၀ န်ဆောင်မှု: ဓာတ်သတ္တုဆီ၊ ရေ glycol၊ အရက်၊ ဓာတ်ဆီ၊ ရေ-ဆီ emulsion၊ ဓာတ်ငွေ့စသည်
အတွင်းအချင်း မီလီမီတာ2234
အပြင်ဘက်အချင်း မီလီမီတာ5568
မက်စ်။ ငြိမ်သက်သောဖိအား ဘား 400 630 630 500
မင်း။ ပေါက်ကွဲဖိအား ဘား 1200 1890 1890 1500
မင်း။ bending အချင်းဝက် မီလီမီတာ 20 20 25 35
အလေးချိန် g 20 20 27 47
အပူချိန်အပိုင်းအခြား ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် -40 〜+100 -40 〜+100 -40 〜+100 -40 〜+100
core ပစ္စည်း PA
အားဖြည့်ပစ္စည်း Fiber သို့မဟုတ် Kevlar
အဖုံးပစ္စည်း PA သို့မဟုတ် PU
ဖိအားစစ်ဆေးရန် Test Coupling PT series test couplings
1. ဖိအားထိန်းချုပ်မှု 1. သွပ်ရည်စိမ်ကာဗွန်သံမဏိ
2. Lubrification လုပ်ခြင်း ၂။ (သံမဏိသံမဏိ AISI 316 ကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။ )
၁။ NITRILBUNAN (NBR) 1. ဟိုက်ဒရောလစ်အဆီများ
၂။ FKM-VITON (တောင်းဆိုချက်အရ) 2. ဓာတ်သတ္တုအဆီများ
3. အလုပ်လုပ်အပူချိန်: ၃။ တောင်းဆိုချက်အရအခြားအရည်များနှင့်သင့်လျော်မှု
4. ၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ...+၁၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (နိုက်ထရီးယား)
5. ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ...+၂၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (FKM)
HF အတိုကောက် micro high pressure flexiable hose assembly ၏အတိုကောက်
2. အခြားအဆုံး၏ Fitting ပုံစံ
3. ပိုက်အမျိုးအစား (2 = DN2,3= DN3,4= DN4)
4. P* ဖိအားအတန်း (P40 = 400bar, P60 = 630bar)
5. ပိုက်အရှည်: မီလီမီတာ
6. ဥပမာ - ချည်ကိုအမြန်ချိတ်ရန်အဆင်ပြေဆုံးအဆုံးတစ်ခုမှာ M16X 2. အခြားတစ်ခုသည်ဖိအား gauge ဖိအား gauge နှင့်ချိတ်ဆက်ထားပြီးချိတ်ဆက်ထားသော thread မှာ MUX 1.5 ဖြစ်သည်။ ပိုက်အမျိုးအစားမှာ DN3 ဖြစ်သည်၊ ဖိအားအတန်းသည် 600BAR (60MPa)၊ ပိုက်အရှည်မှာ ၁၅၀၀ မီလီမီတာရှိသည်၊ ထို့နောက်ဤပုံစံသည် HFH0200-P0100-3-P60-1500o
၇။ သင်ကဖိအား gauge ပါသောပိုက်တပ်ဆင်မှုကိုမှာယူလိုသည့်အခါ pressure range gauge ကို pressure range.gauge diameter (သို့) အခြားအထူးလိုအပ်ချက်အဖြစ်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသင့်သည်။
threaded fitting: P စီးရီး
threaded fitting: အတွဲတစ်ခု
threaded fitting: W စီးရီး
ဆုံလည်အမျိုးသမီး ၆၀ ဒီဂရီ cone ချိတ်ဆက်မှု: D စီးရီး
ဆုံလည်အမျိုးသမီး ၂၄ ဒီဂရီ cone ချိတ်ဆက်မှု: Q စီးရီး
Plug-in ဆက်သွယ်မှု: T စီးရီး
ဆုံလည်အမျိုးသမီး JIC ၇၄ ဒီဂရီချိတ်ဆက်မှု: C စီးရီး
Standpipe fitting: B series
Banjo လျောက်ပတ်ခြင်းနှင့် banjo ဝက်အူ: J စီးရီး
အမျိုးသား fittings: E စီးရီး
အမျိုးသား fittings: Z စီးရီး
R1/4W ယူ -၁၉
ယခင်: ဆီတိုင်ကီပေါ်ရှိ Ylx Series Oil-Sucking Filter
နောက်တစ်ခု: Foam Nozzle ၏ Adapter Connector အတွက် High Pressure Washer
Foam Sprayer Nozzle ဖြစ်သည်, Foam Lance Nozzle ဖြစ်သည်, Nozzle အမြှုပ်, အမြှုပ် Nozzle, High Expansion Foam Nozzle ဖြစ်သည်, Karcher 0.6 L Foam Jet Nozzle Fj6,